ဒီတစ်ပါတ် ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက ပြည်ထောင… – PVTV Myanmar
ဒီတစ်ပါတ် ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး
၈၈ ကတည်းက မျိုးဆက်တွေ တိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲက အခု ၂၀၂၁ မှာ ဘာလို့ တစ်ကြော့ပြန်ရောက်လာရတာလဲ၊
(၈၈) လူထုအရေတော်ပုံကြီးနဲ့ အခု နွေဦးတော်လှန်ရေး အဓိက ဘာတွေများကွာသွားလဲ၊
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာမရှိတော့တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးရောက်ရင် နိုင်ငံက ဘာတွေထူးခြားပြောင်းလဲ သွားမလဲ၊ ဘယ်လို အကောင်းတွေများ မျှော်လင့်နိုင်မလဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 15K Share – 1733
Yaelin Yaelin says:
2021-08-07 at 5:31 PM
2021-08-07 at 5:42 PM
ငါတို႔ က သစ္ေစ့ေတြ ဆိုတာ ေမ့ေနၾကတာ ကုိး။
2021-08-07 at 7:11 PM
2021-08-07 at 7:29 PM
NUGက ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရပါ။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကို တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုစရာမလိုပါဘူး။နိုင်ငံတကာကလည်း လူထုတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရသည် တရားဝင်ပြီးသားဆိုတာ သူတို့ခနခနပြောပါတယ်။ အဓိကတောင်းဆိုရမှာက အာဏာလု စကစကို ထိမ်းသိမ်း ဖမ်းဆီး တိုက်ထုတ်ပေးဖို့ကိုသာ စစ်ရေးကိစ္စကိုသာလျင်တောင်းဆိုရမှာပါ။
2021-08-07 at 8:52 PM
The uprising must be successed
2021-08-07 at 10:25 PM
nug we supporting
2021-08-08 at 10:40 AM
ႏိူင္ ကို ႏိူင္ရမည္
အေရး ေတာ္ ပုံ ေအာင္ ကို
2021-08-09 at 1:03 AM
We stand NUG with together
2021-08-09 at 8:12 PM
2021-08-09 at 8:13 PM
2021-08-10 at 3:05 AM
We stand together !!!
Hla Tun says:
2021-08-10 at 8:24 AM
NUG အစိုးရကို အလေးအနက်ထောက်ခံပါတယ်။
2021-08-10 at 8:26 AM
2021-08-10 at 9:34 AM
NUG. အစိုးရကို 100% အပြည့်အဝအလေးအနက်ထောက်ခံပါသည်
ချစ် လိပ်ပြာ says:
2021-08-10 at 10:29 AM
ငယ္ ငယ္ says:
2021-08-10 at 12:26 PM
2021-08-10 at 1:34 PM
Aye Htut Win says:
ဆရာမ မဖြူဖြူသင်း ညီလေး ဒေါင်း ကျန်းမာပါစေ အရေးတော်ပုံ မုချ အောင်ရမည်
မိုး စက် ပွင့် says:
2021-08-11 at 1:27 PM
ထာဝရ လေးစားပါတယ် ဝန်ကြီး
2021-08-28 at 6:27 PM
နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်လည်း မြန်မြန်လုပ်ပါ​တော့ ပြည်သူ​တွေလည်း ပါဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်​နေပြီ လက်ရုံးတပ်​တွေလည်း အပြင်ကိုရုန်းမထွက်နိုင်​ပေမဲ့ ဖြစ်လာရင် ကူညီဖို့အသင့်ဖြစ်​နေပါပြီ မြန်မြန်​လေးသာ လုပ်ပါ​တော့လူပီသသူအ​ပေါင်းတို့။ကြာ​လေ ပြည်သူနာ​လေဖြစ်​လိမ့်မယ်။
Open your heart, Listen & Sail to Goal